Beer cagaaran | January 2020
Sida loo koro yaanyada beertaada
Xaalad kasta ha noqotee, sida khudaarta quruxda badan iyo miraha ay u eegaan dukaammada dukaamada, waxyaabaha soo koraya gacmahooda ayaa noqon doona kuwa ugu soo jiidashada badan. Xaqiiqdii, waad ogtahay in miraha aan la daaweynin nooc kasta oo daaweyn kiimikada ah oo aan lagu karin kiimikooyinka. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad koraan, tusaale ahaan, yaanyada beertaada, ka dibna ma noqon doonaa wax waqti qaadashada.
Haddii aad waligaa la qabsatay qajaarka, oo ah, raadinta noocyo ku habboon ee sirqoolladaada, ka dibna waxaad u maleyneysaa in weedhahan oo kale ah sida "qajaar shiineys ah". Tani ma aha noocyo gaar ah oo gaar ah, waa noocyada oo dhan, miraha iyaga oo leh laba muuqaal, kuwaas oo ah, qaab muuqaal ah oo dhererkiisu yahay 50 - 80 cm.
"Deganayaasha" ee Waqooyiga: qajaarka Siberia
Ka hor inta aadan iibsan baakad kale oo leh abuurka qajaarka ee qajaarka, waxaad u baahan tahay inaad si taxaddar leh u barto sifooyinka noocyo gaar ah. Ka dib oo dhan, ma baadiyaha kasta oo awood u leh inay u adkeeyaan cimilada Siberian aan raaxo lahayn. Sida qajaarka, dhaqankan wuxuu jecel yahay iftiin iyo kuleyl aad u badan. Hase yeeshee tarbiyada casriga ah ayaa si degdeg ah horay usii mariyay in tiro badan oo noocyo ah oo ka mid ah wakiilkan qoyskooda boodhka hore loo abuuray, taas oo adkeyn karta isbeddelka xaaladaha cimilada xitaa aagga sida Siberia.
Qajaarrada qajaarka: waxa ay tahay iyo waxa la cuno
Bannaanka iyo beeraha waayo-aragnimo leh ee abuuray qajaarka dhowr sano ayaa hubaal ah in la ogaado qajaarka. Magaca kooxda noocyada kala duwan ayaa u muuqday maaddada ugu muhiimsan ee qajaarka. Muuqaalkani waa awoodda dhirta si ay u sameeyaan hal meel oo ka badan hal ama laba qanjidhar isku mar.
Ural Zelentsy: qajaarka ugu fiican ee Ural
Waqtigan xaadirka, tiro badan oo kala duwan oo kala duwan oo qajaar ah, wakiil ka mid ah qoyska bocorka, ayaa laga soo raray dalal kala duwan. Xitaa ninkii beerta ka shaqeeyaa oo leh khibrado badan oo soo kordhaya dalagga dalaggu wuxuu ku dhex mari karaa khayraadkan. Maxaan ka sheegi karnaa sheekooyinka ama kuwa hadda bilaabay in ay koraan khudradan.
Waxaan ku koraan qajaarka on windowsill ah: talooyin wax ku ool ah
Way adagtahay hadda in la helo guri aan lahayn daaqado-ubaxyo on daaqadaha daaqada. Waxay ku kordhiyaan raaxada guriga, sidoo kale waxay abuuraan jawi hal abuur leh. Laakiin si aad ugu korto guriga ma aha oo kaliya masaafo, violets ama dieffenbachia. Wixii foosha noocaas ah xitaa qajaarka. Tani ma aha nidaam qallafsan, gaar ahaan haddii aad ku beerto dhirta ornamental sanado.
Beeraley kastaa waxa ay maqashay nidaamka qaadista qajaarka iyo faa'iidooyinkeeda. Aynu ka hadalno sida loo xoqmo qajaarka beerta furan iyo aqalka dhirta lagu koriyo, iyo sababta qajaarka u u baahan yahay qaabkan. Sida loo xoqdo qajaarka cayayaanka ee cayayaanka ah Cayayaanka la yiraahdo qajaarka, taas oo miraha ay korto oo keliya kiisaska pollination by cayayaanka ama aadanaha.
Her beerta khudradeed kasta soo wajahday cudurada iyo cayayaanka dalagyada khudradda. Waa arrin marka ay dhacdo sababtoo ah daryeel xumo, iyo mid kale marka uu geedka xanuunsanayo sabab la'aan. Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa sida loo badbaadiyo qajaarka cudurada iyo cayayaanka. Badanaa, cudurrada qajaarka ah waxaa keena daryeel caafimaad aan habooneyn.
Maanta, yaanyada waa la jecel yahay lana aqoonsan yahay dhammaan cuntooyinka adduunka. In sida suxuunta oo kaliya ma waxaa loo isticmaalaa, sida ugu dhakhsaha badan oo aan la goostay. Marinades Tani, iyo pickles, yaanyada, kvass iyo vyalyat. Laakiin dadka oo dhan ma dhadhamin macaanka miraha cajiibka ah. Cherry Tomato Jam Cuntooyinka: Cherry yaanyo - 1 kg sonkor - 450 g Lemon - 1 pc.
Yaanyada la kariyey waa qayb muhiim u ah cuntadeena. Waxay ku faraxsan yihiin inay cunaan iyo fasaxyada, iyo miisaska maalinlaha ah. Iyo saynisyahan kasta oo jilicsan ayaa leh cuntooyinka uu jecel yahay yaanyo yaryar ee jiilaalka. Dhadhanka yaanyada qasacadaysan way kala duwanaan kartaa - midab, macaan, dhanaan. Dhammaan waxay ku xiran tahay xawaashka iyo dhajiska lagu darey marinade.
Sidee loola tacaali karaa xajinta yaanyada, daaweynta yaanyada xilliga xagaaga
Marka laga helayo calaamadaha phytoftoras ee goobta, ninkii beerta ka shaqeeyaa wuxuu bilaabaa in uu dhawaaqo dhawaaqa. In maqaalka ah waxaan ka sheekeyn doonaa wax kasta oo la xiriira cudurka iyo sida loola dagaallamo dillaac on yaanyada ee lagu koriyo iyo berrin bannaan. Waa maxay phytoftora: sababa iyo calaamadaha xanuunka Haddii aanad la kulmin phytoftora oo aadan garanayn waxa uu yahay, markaa aad u badan tahay inaadan isku dayin inaad kobciso yaanyada beertaada.
Tamaandho waa mid ka mid ah cagaarka ugu caansan. Iyaga oo aan, laga yaabe, ma samayn karaan on beerta kasta. Khudaarta cagaaran waa mid aad u fiican, waa mid goos goos ah xilliga qaboobaha iyo waliba waxyaabo badan oo faa'iido leh. Badanaa, geedo la iibsaday waxay noqon karaan kuwo daciif ah ama aan ku habboonayn noocyada kala duwan ee aad jeclaan lahayd inaad iibsato.
Sidee loo adeegsadaa yaanyada cherry?
Yaanyada cherry ka mid ah dheer, kala duwan oo hore u bislaaday yaanyo, sida caadiga ah casaan, inkastoo noocyo leh jaalaha, cagaaran iyo xitaa madow la heli karaa. Miraha badanaa waa yar yihiin (10-30 g), laakiin sidoo kale waxay heleen cabbirka kubbadda golf. Qaabku wuxuu ku kala duwan yahay waxoogaa yar oo udhaxeeya. Tamaandhada waxaa loo isticmaalaa sidii cunto fudud, qurxinta suxuunta, lagu daray saladh, qasacadeysan iyo xitaa la qalajiyey.
Siyaabo aan caadi ahayn si ay u koraan qajaarka
Bannaanka uurjiifka badanaa waxay la yaabaan sida loo abuuro berry, dhirtii geedo, iyo khudradda aagga yar iyo waqti isku mid ah goosashada dalagga. Waxaan kuu soo bandhignaa siyaabo xiiso leh oo lagu dhajiyo qajaarka. Ma taqaanaa? Waddanka qajaarka caadiga ah waa gobollada tropical iyo subtropical ee Hindiya, cagta ee Himilooyinka, halkaas oo weli ku kora xaaladaha dabiiciga ah.
Waxaad dhigi kartaa dhadhan qaali ah oo guriga lagu dhajiyo xitaa haddii hantida uusan lahayn dhul beereed, ama dacha. Xaaladahan oo kale, badbaadada keliya ayaa noqon doonta noocyada qajaar ee balakoonka, sharaxaadda ugu caansan ee aan samayn doono xiga. Abriil Kala duwan Tani waa bisaylkiisa hore, taas oo ka dhigaysa suurtagal ah in la arko on duurka ee dhirta this ugxansiisaha hore ee miraha gudahood 1.5 bilood ka dib soo baxa caleemaha.
Sida loo koro yaanyada korontada
Hydroponics waa tiknoolaji ah oo dhirta la koray iyada oo aan la isticmaalin ciidda. Nafaqada xididada waxay ku dhacdaa jawi dabiici ah. Waxay noqon kartaa hawo qoyan labadaba, biyo aad u culus, iyo mid adag (muuqaal, qoyaan iyo hawo qaadasho). Iyada oo habkan loo baahan yahay waraabin joogto ah ama joogto ah oo la isticmaalayo xal ka shaqeynaya cusbada macdanta, ka kooban kuwaas oo ku xidhan baahida warshad gaar ah.
Sida loo koro qajaarka on windowsill ee jiilaalka
Dhiroonka qorraxda daaqadaha xilliga qaboobaha - tani ma aha wax maskaxeed, laakiin xaqiiqda, oo lagu abaabulo guriga beeralayda. Laakiin tani waa suurtogalnimada marka la isticmaalayo noocyo khaas ah oo qajaarka ah ee sii kordhaya ee xilliga qaboobaha ee guri dabaq ah oo raacaya dhammaan xeerarka daryeelka iyaga. Noocyada qajaarka ee xayawaanka daaqada Thanks to shaqada degdegga ah ee jannaha maanta, beeraha khudradda kasta iibsan kara miraha qajaar ah oo awood u leh inuu koro oo midho u dhali xitaa xaaladaha gudaha.
Metotria waa geedka asal ahaan ka soo jeeda Afrika, waxay leedahay miro la cuni karo waxayna noqotaa mid caan ah oo caan ah oo ka dhexjirta jacaylka dhaqamada qalaad. Hilib yar oo qajaar ah: sharaxaadda geedka Melodia ayaa iska leh qoyska bocorka, oo leh miraha la cuni karo iyo khudaarta cagaaran. Warshadu waxay leedahay liana-sida afkeed ka dheer saddex mitir dheer, caleemuhu waxay u eg yihiin qajaar, saddex xagal muuqaal ah oo leh geeso fiiqan, laakiin aan lahayn qajaar qajaar ah.
Xagaaga xagaaga oo dhan way ogyihiin in haddii dhowr sanadood oo isku xigta ay ku beeraan dalagyo isku mid ah isla goobtaas, ka dibna xitaa xitaa xaalado isku mid ah oo daryeel ah, waxay noqdaan kuwo badan oo jilicsan sanad kasta oo midho dhadhan ah. Xaaladda Tani waxay sababtay hoos u dhigista ciidda, taas oo, taas oo ay sabab u tahay dhowr arrimood.